१४ दिनदेखि वेपत्ता १३ बर्षिया अनिल! कतै भेटिन सक्छ कृपया सेयर गरिदिनुहाेला – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > १४ दिनदेखि वेपत्ता १३ बर्षिया अनिल! कतै भेटिन सक्छ कृपया सेयर गरिदिनुहाेला
१४ दिनदेखि वेपत्ता १३ बर्षिया अनिल! कतै भेटिन सक्छ कृपया सेयर गरिदिनुहाेला
admin July 5, 2019 Uncategorized	0
बागलुङ- जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका–४ हिलका एक बालक १४ दिनदेखि वेपत्ता भएका छन् । बागलुङ सदरमुकामस्थित धौलागिरी चोकमा बस्दैआएका १३ वर्षीय अनिल राई गत असार ६ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएको परिवारले जनाएको छ
राई बागलुङस्थित विद्यामन्दिर माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन् । आकाशे रंगको सर्ट र जिन्स पाईन्ट लगाएर धौलागिरी चोकस्थित कोठाबाट बाहिरिएका उनी त्यसपछि सम्पर्कमा नरहेको अनिलका आमा मनकुमारी राईले बताए । हराएका बालकको खोजी कार्य जारी राखिए पनि फेला पार्न नसकिएको प्रहरीले बताएको छ ।
अत्यन्तै दुखद खबर खुकुरी प्रहार गरी आमाको ह*त्या,खुल्यो यस्तो रहस्य!
बझाङमा सह–चालकले साइड लगाउन खोज्दा बस १०० मिटर तल खसेपछि…
अरेबियन महिलाहरु किन यति सुन्दर र कामुक हुन्छन् ? यस्तो छ रहस्य !